फिक्का फिक्काको शिर्ष गीत - Youtube वाच - साप्ताहिक
फिक्का फिक्काको शिर्ष गीत
चलचित्र ‘फिक्का फिक्का’को शिर्ष गीत सार्वजनिक भएको छ । गरिवीको कथामा आधारित तयार पारिएको पारिवारीक प्रेमकथामा बनेको चलचित्र को ‘फिक्का फिक्का’बोलको गीत सार्वजनिक भएको हो । सार्वजनिक गीतमा अर्जुन रत्नको शब्द तथा चेतन सापकोटाको संगीत रहेको छ । स्वर भने तुलसी शिवाकोटीको रहेको छ । तुलसी यहि गीत मार्फत चलचित्र गायनमा डेब्यु गर्दै छन् ।
नेपालको पहिलो महिला निर्देशक सुचित्रा श्रेष्ठ र चलचित्र सम्पादक नहकुल खड्काको निर्माणमा बनेको चलचित्रको प्रस्तुतकर्ता एनआरएन जापान बसोबास गर्ने अजय सुनार रहेका छन् । चलचित्रलाई युवा निर्देशक जनक खड्काले निर्देशन गरेका छन् ।
बेरोजगारी, गरीवी, माया, पारिवारिक बन्धन, निरास जीवनलाई प्रस्तुत गरिएको देख्न सकिन्छ । मंसिर १ गतेबाट नेपालभर रिलिज हुन लागेको यस चलचित्रको विदेशमा भने शो सुरु भैसकेको छ । यसअघि जापानमा भएको शो दर्शकले मन पराएपछि जापान, बेल्जियम, स्पेन, लण्डन, बहराईन लगायतका देशहरुमा समेत शो हुन लागेको अजय सुनारले बताए । जापानका अन्य सहर। युरोप र अमेरिकाका शहरहरुमा समेत चलचित्रको शो को तयारी भैसकेको बताईएको छ ।
रिता खाति सुनारको लेखन, एन. बी. अन्जानको कला निर्देशन रहेको चलचित्रमा एन आर एन अजय सुनार, राष्ट्रिय मार्सलआर्ट खेलाडी एंव रेडियोकर्मी दुर्गाराज पाण्डे, मोडल सर्मीला नेपाल, सञ्चारकर्मी राधिका घिमिरे, ईश्वरी बराल, मुस्कान काप्री लगायतको अभिनय रहेको छ । चलचित्रलाई राजु श्रेष्ठले सम्पादन, अनन्त घिमिरेले कलर करेक्सन, अमित श्रेष्ठले व्याकग्राउण्ड म्युजिक एंव मिक्सिङ, नवराज भण्डारी, सुजन श्रेष्ठ, म्याक्टेन कालुले सहायक निर्देशन गरेका छन् ।
फिक्का फिक्काको भिडियो
गरुड पुरानको गीत